Egwu Instagram rutere ọtụtụ mba Latin America: anyị na-akọwa otu ị ga - esi mee ya nke ọma | Gam akporosis
Site ugbu a gaa n'ihu, enwere ọtụtụ ndị ọrụ na Latin America ndị nwere ike nwee akwụkwọ niile ọ na-enye Egwu Instagram. Netwọk mmekọrịta enyela ọrụ a maka Akụkọ na ọtụtụ mba ụwa, gụnyere nke Europe na mpaghara North America, yana ndị nke mpaghara ndị ọzọ, mana ndị nke mpaghara ndịda America enweghị ike ịnụ ụtọ ya (belụsọ Argentina ), nke bu akuko ochie.
Colombia, Chile, Venezuela na Uruguay bụ naanị otu n'ime mba nwere ike iji ngwa ọrụ a nye akụkọ ha ihe egwu site na netwọkụ mmekọrịta.
Etu esi bulite akụkọ na egwu Instagram
Y’oburu n’inwe otu n’ime ndi ichoro tinye egwu gi hotara na Akụkọ banyere Instagram gi, ugbua inwere ike ime ya site na otu ngwa. Iji nweta ọrụ a, naanị gaa na ngalaba nke Akụkọ gị, nke dị na elu aka ekpe nke ngwa ahụ, dị n'okpuru akara ngosi nke netwọkụ mmekọrịta, na ibe peeji.
Mgbe, ozugbo ahụ, ị ​​na-aga Musicdị egwu, nke ị ga-ahụ ngalaba atọ: Popular, Mood y Genres. Nke mbụ nwere ọtụtụ abụ ndị e ji mee ihe ma gee ntị; na nke abụọ e nwere ndị na, dị ka ngalaba na-egosi, metụtara ọnọdụ ọ bụla nke uche; na nke atọ ha na-edozi site n'ụdị (Hip Hop, R&B na mkpụrụ obi, Rock, Pop, na ndị ọzọ).
Ọzọkwa, tupu ihe ọ bụla, ị nwere ike ịse foto ma ọ bụ dekọọ vidiyo, wee gbakwunye egwu ị họọrọ site na ngalaba nke emoticons, GIFs, ajụjụ, okpomọkụ na ndị ọzọ, nke bụ nke gosipụtara na nseta ihuenyo mbụ nke anọ na-esote nke anyị biputere n'okpuru. Na mgbakwunye na nke a niile, ị nwere ike ịhọrọ font na agba nke okwu iji tinye na vidiyo ma ọ bụ foto, họrọ akụkụ nke egwu ịchọrọ ịkpọ na ndị ọzọ.
N'ihe banyere vidiyo, I nwekwara ike ịgbakwunye otu n'ime nzacha ise dịnụ: Pulse, Brightness, Vintage, VCR na Glitch. N'ikpeazụ, ịnwere ike ịgbakwunye ihe ndị ọzọ dị ka hashtags, GIFs, ederede na ndị ọzọ, dị ka a ga - asị na ọ bụ akụkọ ọzọ, naanị na ihe dị iche bụ egwu agbakwunyere na egwu nwere ike ọ gaghị apụta (nke a bụ nhọrọ). Iji mechaa ma bulite akụkọ ahụ, anyị pịa Ziga ka, bọtịnụ nke dị n'akụkụ aka nri ala nke ihuenyo na, emesia, na nhọrọ mbụ na-egosi, nke bụ Akụkọ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Egwu Instagram rutere n'ọtụtụ mba Latin America: anyị na-akọwa otu esi eji ya eme ihe
Kirin 990 ga-abịa na 5G wuru na ala